Taliban oo ballan-qaad u sameysay Afghaaniyiinta u shaqeeya Mareykanka iyo NATO | Biyoguurenews.com
Home Wararka Taliban oo ballan-qaad u sameysay Afghaaniyiinta u shaqeeya Mareykanka iyo NATO
Taliban oo ballan-qaad u sameysay Afghaaniyiinta u shaqeeya Mareykanka iyo NATO
KABUL — Taliban ayaa ku boorisay Afghaniyiinta sanadihii tagay la shaqeynayay militariga Mareykanka iyo NATO ee dalkaasi ka baxaya inay “uga tagin” dalkooda cabsi ay ka qabaan in ay kooxdan kacdoonku ka aargudato awgeed.
Ballanqaadka ay Taliban sameysay Isniinta maanta ah ayaa imanaya iyadoo kumanaan reer Afghanistan ah una badan turjubaano la shaqeynayay Maraykanka iyo dalalka xulafadiisa ah ku dhowaad labaatameeyo sano oo ay dalkaasi joogeen ay ka baqayaan aargoosiga Taliban, islamarkaana aad u daneynayaan in ay helaan fiisaha dal ku galka Mareykanka.
“Imaaradda Islaamiga ah [Taliban] ma wareeri doonto, laakiin waxay ugu baaqeysaa in ay ku laabtaan noloshoodii caadiga ahayd iyo haddii ay khibrad u leeyihiin dhinac kasta, in ay dalkooda ugu adeegaan. Wax khatar ah dhinaceenna kama jiri doonto,” ayay Taliban ku tiri bayaan ay u dirtay wariyeyaasha islamarkaana lagu daabacay warbaahinteeda rasmiga ah.
Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa lagu wadaa in ay si dhameystiran Afghanistan uga baxaan bisha September 11-keeda.
Qiyaastii 18,000 oo Afghaniyiin ah ayaa sugaya fiisooyinka Mareykanka ee muhaajiriinta gaarka ah ee loo soo gaabiyo SIV, waxaana jira walaac ah in maamulka madaxweyne Joe Biden uusan awoodin in uu dhammaantood ku dhameystiro waqtigaasi.
Biden ayaa waxaa ku sii kordhaya cadaadiska lagu saarayo in uu si dhaqso uga shaqeeyo si loo badbaadiyo nolosha shaqaalaha u dhashay Afghanistan ee naftooda khatarta ugu geliyay la shaqeynta militariga Mareykanka.
Previous articleAbubakar Shekau: Koox sheegtay in uu geeriyooday hoggaamiyihii Boko Xaraam
Next articleSiyaasiga Dronka ah ee Cali Gueay oo faaleeyay Qidada Lagu kala Hororsanayo kursiga Gudoonka barlamaanka iyo ka caasimada hargeya